काबेली-३ जलविद्युत् आयोजनामा एनएमबि ब्यांक लिमिटेडले मुख्य लगानीकर्ता भएर वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ।
अरुण-४ भारतलाई दिएर नाफा भयो कि घाटा? “राष्ट्रवादी देखिने गरी विरोध गरेर मात्र हुँदैन, नेपाललाई योभन्दा बढी लाभ कसले दिन्छ?” कुलमान घिसिङ भन्छन्, “उसै पनि लगानी र बजार खोज्न सकस परिरहेका वेला, सतलजले नै ऋण र बजार खोज्ने भएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण सुविधा हो।”
भारतबाट प्रति युनिट ३८ रुपैयाँमा बिजुली किन्दै प्राधिकरण, बिक्री मूल्य नबढ्ने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट प्रति युनिट ३८ रुपैयाँमा बिजुली किन्ने भएको छ। महँगोमा किने पनि मूल्य भने नबढ्ने भएको छ।
कुलमान भन्छन्- लोडसेडिङ हुँदैन, हुन पनि दिंदैनौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ नहुने र हुन पनि नदिने बताएका छन्।
रुकुमको सबस्टेशन निर्माण आठ वर्षमा पूरा
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका-३, धैरेनी चौरमा निर्माण भएको ३३/११ केभीको मुसिकोट सबस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा देशकै दोस्रो ठूलो सबस्टेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशकै दोस्रो ठूलो सबस्टेशनको शनिबार उद्घाटन गरेका छन्।
फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य, पेट्रोल प्रति लिटर १५५ रुपैयाँ नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि वृद्धि गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्छ, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरौं: ऊर्जामन्त्री भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै आयात धान्न मुश्किल हुँदै गएकाले अब विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न आह्वान गरेकी छन्।
माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ आयोजनाको प्रगति ५८ प्रतिशत, निर्माण सकिन अझै डेढ वर्ष लाग्ने जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ५८ प्रतिशत सकिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि मूल्यवृद्धि, पेट्रोल प्रति लिटर रू. १५० सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले बिहीबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर रु.५ का दरले बढाएको हो ।
चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा, १० अर्ब लाग्ने चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ भने यसमा १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
वर्षायाममा खपत भएर उब्रिएको बिजुली लैजान भारत सकारात्मक नेपालमा वर्षायाममा खपत भएर उब्रिएको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न दिन भारत सकारात्मक भएको छ।
एक दशकपछि सकियो सोलु करिडोर प्रसारण लाइन पूर्वी नेपालको सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ।
देशभर ४० स्थानमा हुन्डाईको चार्जिङ स्टेशन नेपालका लागि हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले इलेक्ट्रिक भेहिकलको चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने भएको छ।
माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई नै समय थप्ने तयारी सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनी जीएमआर (ग्रान्धी मालिकार्जुन राव) लाई थप समय दिने तयारी गरेको छ।
चिसो बढेसँगै भारतबाट विद्युत् आयात बढ्यो विद्युत् माग बढेसँगै आन्तरिक विद्युत्‌गृहहरूको उत्पादन क्षमता खस्किएपछि भारतबाट विद्युत् आयात बढेको छ।
सोलार बिजुलीको खरीद दर प्रतिस्पर्धाबाट निर्धारण हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत् खरीद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ।